आफ्नो क्षेत्रका सम्भावना र समस्या जानकारी नहुँदा काम गर्न समस्या पर्छ
Thursday, 29 Mar, 2018 2:17 PM
मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि अहिले जनप्रतिनिधिले स्थानीय तह हाँकिरहेका छन् । सुरूवाती चरणमा भएर हुनसक्छ धेरै जनप्रतिनिधिमा काम कसरी सुरू गर्ने भन्ने अन्योल देखिन्छ । कतिपय स्थानीय तहमा सुरूमै ह्वारह्वार बजेट सक्ने त कतिपय तहमा बजेट नै खर्च गर्न नसक्नेजस्ता समस्या देखिएका छन् । कतिपय जनप्रतिनिधि भने कुन काम, कसरी गर्ने भन्ने अन्यौलमा छन् । नयाँ जनप्रतिनिधिले पुराना जनप्रतिनिधिबाट केही अनुभव लिनसक्दा पनि काम गर्न धेरै नै सहज हुन सक्छ । ०५४ मा भक्तपुरको मध्यपुर थिमीको मेयर बनेका मदनकृष्ण श्रेष्ठले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई केही सुझाव दिएका छन् । मुलुकमै पहिलोपटक भू–उपयोग नीति लागु गर्ने उक्त नगरपालिकाले बुधबार २२औँ वर्षगाठ मनाएको छ । त्यतिबेला काम सुरू गर्दाको अवस्था, अहिलेका जनप्रतिनिधिले लिनुपर्ने कदमबारे न्यूजसेवाले सोधेका प्रश्नमा पूर्वमेयर श्रेष्ठको जवाफ :
–अहिलेका जनप्रतिनिधि काम कसरी सुरु गर्ने भन्नेमै अलमलमा परेजस्ता देखिन्छन् । तपाई त ०५४ मा मेयर बन्नुभएको मान्छे, त्यतिखेर कसरी काम सुरु गर्नुभएको थियो ?
१४ चैत ०५३ मा पाँचवटा गाविस मिलेर मध्यपुर थिमी नगरपालिका घोषणा भएको हो । म ०५४ मा मेयरमा निर्वाचित भएँ । तपाईंले भनेजस्तै हामीले शुन्य अवस्थामा काम सुरू गरेका हौँ । सुरूमा त्यहाँ केही डाटा थिएन । कहाँ के छ, कस्तो छ भन्ने कुनै सूचना पनि थिएन । नगरपालिकाकै कस्तो संरचना थियो भन्ने जानकारी थिएन । त्यस्तो अवस्थामा हामी कहाँ छौँ, हाम्रो नगरपालिका कस्तो छ, हाम्रा समस्या के हुन् भन्ने जानकारी नहुँदा काम गर्न सहज भएन । अझ त्यतिबेला बजेट पनि थिएन । सरकारको अनुदान निकै न्यून थियो । हामीले सुरूमा नगरपालिकाको नक्साङ्कन गर्ने कार्य गर्यौँ । युएसएड, नास्ट लगायतका संस्थाबाट विभिन्न नक्साङ्कन गरिसकेपछि हामीले त्यस नगरपालिकाभित्र रहेका समस्यालाई सूचिकरण गर्यौँ । यति गरेपछि त्यहाँका सवल पक्ष र कमजोर पक्ष सबै जानकारीमा आइसकेपछि १० वर्षको योजना बनायौँ र काम अगाडी बढायौँ ।
हाम्रा ३८ वटा नक्सामध्ये एउटा नक्सा भू–उपयोग नक्सा थियो । त्यसमा मध्यपुरको जमिन कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने चित्रण गरिएको थियो । त्यसै आधारमा हामीले नेपालमै पहिलोपटक भू–उपयोग नीति बनायौँ । जुन कार्यले सबैतिरबाट वाहवाही पनि पायो । हामीले आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिकजस्ता पाँचवटा आधार बनाएर बोर्डबाट निर्णय गर्दै अगाडी बढ्यौँ । भू–उपयोग नीति अन्तरगत यस नगरपालिकालाई तिब्र शहरीकरणबाट कसरी बचाउने भन्ने विषयमा धेरै छलफल गर्यौँ । हामीले अग्लो स्थानमा बस्ती बसालेर होँचो भागमा सिमसार क्षेत्र घोषणा गर्यौँ र त्यसमा खेती वालीलाई जोड गर्यौँ । यसको रिजल्ट निकै राम्रो आयो । जस्तो सानोठिमीलाई प्रशासनिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्यौँ । अहिले पनि त्यहाँ शिक्षा सम्बन्धि ठूल्ठूला कार्यालय रहेका छन् । ओपन स्पेस छ । काठमाडौं शहरीकरणले कुरूप भइरहँदा मध्यपुर ठिमी नगरपालिका नमुनाका रूपमा अगाडी आयो । तर, अहिले भने शहरीकरणको समस्या त्यहाँ पनि बढ्दै गएको छ ।
–तपाईंले जिरोबाट सुरु गर्नुभएको थियो, तपाईको कार्यकाल सकिएपछि विकास निर्माणका काम कुन गतिमा अगाडि बढ्यो ?
हामीले त्यतिबेला बोर्डबाट निर्णय गथ्र्यौँ, हरेक कुरा । हरेक कुरालाई निकै धेरै छलफल र होमवर्क गरेर कार्यान्वयन गथ्र्यौँ । जसले गर्दा रिजल्ट पनि राम्रै आइरहेका थिए । अहिले पनि त्यसमा केही सानातिना सुधार त भएको छ । तर, काम गर्दा जनप्रतिनिधिले सम्बन्धित निकाय, पूर्वज जनप्रतिनिधिहरूसँग राय सल्लाह लिएर गर्नु आवश्यक छ । मध्यपुरमा अहिले शहरीकरण बढेको छ । यसमा सुधार आवश्यक छ । सरोकारवाला सबैसँग सल्लाह लिएर अगाडी बढ्नुपर्ने आवश्यकता देख्छु म ।
–संघीयताको ‘फेम’मा जनप्रतिनिधिहरु अन्योलग्रस्त देखिन्छन्, जनप्रतिनिधि भइसकेपछि आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के–के रहेछन् ?
मुख्य कुरा त आफू जनप्रतिनिधि भइसेकपछि त्यहाँका सम्भावना के–के हुन् र समस्या के–के हुन् भन्ने पत्ता लगाउनुपर्यो । आफ्नो क्षेत्रका यी विषयमा जानकारी भएन भने न नीति बनाउन सकिन्छ, न त काम नै गर्न । यति जानकारी भएपछि विकास गर्ने मोडल र सेड्युल बनाएर अगाडी बढ्नुपर्छ । अर्को कुरा भू–उपयोग नीति बनाएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले विकासमा एउटा नयाँ धार देखा पर्छ । अहिलेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाजी र प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले पनि भू–उपयोग नीति बनाउनुपर्छ भन्नुभएको छ । चुनावमा भाषण दिएर मात्र भएन, काम गर्न गाह्रो छ । विकास निर्माणका नीति नियमहरु बनाउन अत्यन्तै गाह्रो छ । सबैलाई मिलाउनुपर्ने, सबैको कुरा सुन्नुपर्ने हुन्छ । सबैभन्दा पहिलो त हाम्रो नगरपालिकाको के कस्तो अवस्था छ भनेर थाहा हुनुपर्यो । हाम्रो शरीरको अवस्था थाहा पाएपछि मात्रै त डाक्टरले औषधी दिन्छ । स्थानीय निकायको पनि त्यो हरेक अवस्था थाहा हुनुपर्छ । त्यहाँको बलियो तथा कमजोर पक्ष के–के छ छुट्याउनुपर्छ । यदि त्यो थाहा नभए हामी कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने पत्तो नै हुँदैन ।
–तपाईंले त्यो समयमा गरेका त्यस्ता केही उदाहरणीय काम के–के हुन् ?
हमीले नीतिगत रूपमा नमुनाकै रूपमा अगाडी लगेका थियौँ । नक्साङ्कनदेखि भू–उपयोग नीति बनाउनाले काम गर्न सजिलो भयो । शहरी विकास विभाग, नगरपालिका र जर्मन सरकारको सहयोगले त्यो काम भयो । त्यसबेला हाम्रो बजेट १८ लाख थियो । त्यति बजेटले कुनै विकास निर्माणका कार्यहरु गर्न पुग्ने थिएन । हामीले योजनाबद्ध रूपमा काम गर्यौँ । हामीले प्रोजेक्ट बनायौँ । ६–७ वटा एनजीओ–आइएनजीओहरु आए । मध्यपुरमा थुप्रै ढलहरु बने । त्यहाँका सामुदायिक स्कुलका शौचालयहरु फोहोर थिए, ती सफा गर्न सहयोग पुग्यो । बगैँचा बने, पार्कहरुसमेत बने । बाटोघाटो फराकिलो बनाउने काम भए । कतिपय क्षेत्रमा हामीले बनाएका ती सडक अहिले पनि उदाहरणीय नै मानिन्छ । अर्को कुरा, खानेपानीको स्थिती नाजुक थियो । ६ लाख लिटर मात्र पानी थियो । पानीमा आइरनको मात्रा बढी थियो । हामीले खानेपानी बोर्डमा पहल गरेर ४ वटा कुवा विश्वबैंकको सहयोगमा सफा गर्यौँ । यसका साथै १ करोड ६५ लाख लिटर पानीका लागि जाइकाको प्रोजेक्ट पनि ल्यायौँ । यसले खानेपानीको क्षेत्रमा पनि ठूलो सहयोग पुग्यो । नेपाल कोरिया अस्पताल पनि हाम्रै पहलमा ल्याइएको हो । यसले मध्यपुरका मात्र नभएर मुलुकभरका जनताको स्वास्थ्यका लागि ठूलो सहयोग पुग्यो । त्यतिबेला शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा पूर्वाधारमा हामीले धेरै काम गर्न सफल भयौँ ।
–आफ्नो कार्यकाल कत्तिको सफल भएजस्तो लाग्छ ?
विकास निर्माणका काम त मैले भनिहालेँ । म सफल कि असफल भन्दा पनि म कुनै कार्यलयमा जाँदा, मन्त्रालयमा जाँदा सबै पदाधिकारीहरुले तपाईंले मध्यपुर थिमी नगरपालीकालाई राम्रो गर्नुभएको हो भन्नुहुन्छ । हामीले महोत्सव पनि गर्यौँ । कम खर्चमा धेरै राम्रो कामहरु पनि गरेका छौँ । पहिले जता गएपनि खुला शौचालय थियो, तर अहिले सबै सफा बनाएका छौँ । मेरो कार्यकालमा मठमन्दिर बनाउने, पाटीपौवा बनाउने, ढुङ्गा इटा छाप्ने लगायतका कामहरु भएका छन् । मेरो कामप्रति नगरबासी सबै सुखी र सन्तुष्ट छन् ।
–तपाईंले थुप्रै काम गरेको बताउनुभयो । अहिले पनि त जनप्रतिनिधि आएका छन्, उनीहरूको कार्यशैली तपाईंलाई कस्तो लाग्दैछ, चित्त बुझेको छ कि छैन ?
चुनावमा बोलेजस्तो गर्न जनप्रतिनिधिलाई सजिलो छैन । १० महिना भैसक्यो अहिलेका जनप्रतिनिधिले केहि काम देखाउन सकेका छैनन् । सक्षम छ भनेर सबै नगरबासीले भोट दिएका थिए, तर अहिलेसम्म काम गर्न सकेको मैले पाएको छैन । अहिलेका मेयरले गर्न नहुने धेरै काम गर्नुभएको छ । मापदण्डविपरित प्लटिङ गरिएकोे छ । ८ मिटर बाटो राख्नुपर्ने ठाँउमा ६ मिटर राखिएको छ । ६ मिटर राख्नुपर्ने ठाँउमा ४ मिटर राखिएको छ । ३ प्रतिशत ओपन स्पेस राख्नुपर्ने नियम छ । त्यो पनि राखिएको छैन । अहिले भू–उपयोग नीति पनि लत्याइएको छ । तिब्र रूपमा बढेको शहरीकरण र खेतियोग्य जमिन मास्दा पनि आफ्नो स्वार्थ मात्र हेर्ने काम भएको छ । यसो गर्दा भोलि नगरपालीकामा भद्रगोल हुने खतरा देख्छु । त्यसैले अहिलेको कार्यशैलीमा म खुसी छैन ।
–पूर्वजनप्रतिनिधिको हैसियतले तपाईसँग अहिलेका मेयरले कुनै समन्वय गर्नुभएको छ ?
मसँग मात्र होइन उहाँले कसैसँग पनि समन्वय र सल्लाह गर्नुभएको छैन । म मेयर हुँदा सबैसँग सल्लाह गरेर काम गर्थेँ । मैले हरेक पार्टीमा सल्लाह गर्थैँ, ताकि भोलि काम गर्न सहज होस् र कुनै विवाद नआओस् भन्ने उदेश्यले । अहिले उहाँले पार्टीभित्र वा अन्य कसैसँग सल्लाह नै गर्नुहुन्न । बिहीबारमात्र नगरपालिकाले २२औँ स्थापना दिवस मनाएको छ । तर, त्यो विषयमा कुनै मिटिङ राखिएन । कसैसँग सल्लाह नै नगरी मध्यपुरमा १७ जनालाई सम्मान गरिएकोे छ । सम्मान गर्नु राम्रो हो । तर, कसलाई गर्ने भनेर निर्णय गरेर गर्नुपर्छ । उहाँले आफुखुशी गर्नुभयो । आज मध्यपुरमा २ ठाँउमा स्थापना दिवस भइरहेको छ । त्यो दुर्भाग्य हो । यो नेतृत्वको कमजोरीले गर्दा हो । उहाँले अन्य थुप्रै कामहरु नीति नियम विपरित गर्नुभएको छ । मापदण्ड विपरित नक्सा पास भएका हुन् । हचुवाका भरमा निर्माण सम्पन्न गर्न दिइएका छन् । आफुसँग नभएको अधिकारलाई पनि मेयरबाट दुरूपयोग हुनु भनेको दुर्भाग्य हो ।
–अहिलेका नगर प्रमुखलाई तपाईंका सुझाव के के छन् ?
सबैभन्दा ठुलो त सरसल्लाह र छलफल नै हो । समन्वयमै चल्नुपर्छ । कुनै काम गर्दा मेयरले पुराना जनप्रतिनिधि लगायत सबैसँग सल्लाह गरेर निर्णय लिनुपर्छ । यदि यसो गरियो भने नराम्रो कुरालाई पनि राम्रो बनाउन सकिन्छ । तर, तानाशाही शासन ल्याउन खोज्यो भने राम्रो कुरा पनि नराम्रो भएर जान्छ । मेरो सुझाव भनेको सरोकारवाला निकाय, स्थानीय राजनीतिक दल, संस्था, पुराना जनप्रतिनिधि सबैसँग सल्लाह गरेर काम अगाडी बढाउँदा उहाँलाई नै काम गर्न सहज हुन्छ ।
–नगरपालीकाले अहिले तत्काल गर्नुपर्ने कामहरु के–के होलान् ?
तत्काल गर्नुपर्ने सरसफाइ हो । त्यसपछि ढलको मास्टरप्लानमा सुधार गर्नुपर्यो । सडकको मापदण्ड पनि तोक्नुपर्ने छ । भइरहेको सडकको स्थिती हेरेर सुधार गर्नुपर्यो । मेलम्चीको पाइपलाइनलाई छिटोभन्दा छिटो विस्तार गर्नुपर्यो । जथाभावी बस्ती बसाउनु भएन । व्यवस्थित शहर कसरी बनाउने भनेर सोँच्नुपर्ने छ, साथै खानेपानीको समस्यालाई पनि समाधान गर्नुपर्ने छ ।